Kuphele inyanga hhayi imikhankaso yabesifazane - Bayede News
Uwuhlakazile uMphathiswa uMkhandlu waseMadlangeni
Umbiko wakamuva ngobugebengu eNingizimu Afrika uveza ukuthi njalo emveni kwamahora amathathu kuleli kubulawa owesifazane.
Yingakho i-African National Congress Women’s League (ANCWL) esifundeni iMoses Mabhida ngoMsombuluko ihlele imashi yokuqwashisa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane eMgungundlovu. Kule mashi bekukhona ubuholi bale nhlangano, abesilisa nabesifazane abangamalungu omphakathi. Le mashi isukele eNyuvesi YaKwaZulu-Natal yaya ehholo ledolobha.
UNobhala we-ANCWL kulesi sifunda obehlele le mashi uNkk uZanele Ngcobo uthe ngayo bebehlose ukunxusa izakhamuzi zaseMgungundlovu namaphethelo ukuba zilwe nesenzo samadoda sokubulala abesifazane, izingane nabadala baze babaphuce nemali yesibonelelo sikaHulumeni.
“Sibonile ukuthi lo mkhuba uyanda lapha eMgungundlovu ezindaweni ezifana neSweetwaters kwaMpumuza, eMafakathini nakwaDambuza lapho osekube nezigameko eziningi abanye baze balahlekelwa yimiphefumulo,” usho kanje.
Uthe omunye umkhuba osudlangile ukuhlukunyezwa kwamantombazane asakhula ngamasoka awo egameni lothando nalapho bayaxwayisa ukuba lo mkhuba uphele. “Sibonile naseRichmond lapho ubaba womntwana ongamzali ngokwegazi emshaya kanzima waze washona. Umntwana ubengenacala kepha ngoba umama ubehlala nalo baba ongamzali uze wahlukumeza naye, konke lokhu sithi sekwanele singomama,” kusho yena.
UNkk uNgcobo uthe lo mkhuba ususabalalele naseMthwalume, ogwini oluseningizimu yesifundazwe, lapho sekutholwe inqwaba yezidumbu zabesifazane emahlathini okukholakala ukuthi babulewe umalugaju.
“Sinenkinga yokuthi lowo obeboshiwe kuthiwa uzibulele ejele, singomama sithi umthetho awuthathe indawo yawo wenze okulindeleke kuwo ukulekelela ukunikeza izakhamuzi ubulungiswa. Kwezinye izikhathi uthola umphakathi usuzithathela umthetho ngezandla. Kulo mkhankaso sizonxusa nengalo yomthetho ukuba iklame indima yayo ukusivikela,” usho kanje.
Uqhube wathi bafisa nezinkantolo ziklame eyazo indima emqoka emacaleni ahlobene nokunukubezwa kwabesifazane kucace ukuthi ahamba aphelela kuphi. Uthi phezu kwalokho bafuna abasolwa kula macala banganikwa ibheyili ngisho noshwele kwasebalahlile ngoba abafundi ezenzweni zabo.
“Sinesifiso sokuthi laba abenza lokhu ngabe bahlala endaweni esike sizwe kuthiwa isekhulukuthu, bangaboni ngisho ilanga ngoba baphinde bathole namalungelo ngaphakathi,” kusho yena.
Unxuse ukuba amaphoyisa angazenzi izinkantolo uma abesifazane beyobika amacala bathi akuhanjwe kuyoxoxiswana, umuntu otholakale enza lokho kufanele aboshwe futhi owesifazane akangaze afe ukuze kuvulwe icala.
Umlimi usabisa ngokudiliza isikole epulazini
Uveze ukuthi umkhankaso wabo bazowuqhuba noma inini, ubusuku nemini, njengoba seyiphelile inyanga yabantu besifazane kuze kushaye isikhathi lapho amadoda elalela khona aze athi “hhayi egameni lethu” ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane.
“Sifisa kuqashwe indlela esikhulisa ngayo izingane zabafana kangangokuba uma zisakhula ziya ebunsizweni zize zibe ngamadoda zidlulise umlayezo wokuthi abantu besifazane abahlukunyezwa, bayanakekelwa futhi bayakhuliswa,” kusho uNkk uNgcobo.
Uphethe ngokuthi lo mlayezo ngokuhlukunyezwa kwabesifazane bawudlulisa esifundeni iMoses Mabhida, esifundazweni nakuzwelonke.
“Lolu dlame sesiluthatha njengobhubhane lwesifo esingalapheki, sinethemba ukuthi kuzolunga ngoba emikhankasweni yethu siyakhuleka simcele noMdali ukuthi angenelele konke okwethu sikwenzile, uyena oyobuyisa umqondo kubantu besilisa, labo abalahlekile babuyelwe ubudoda,” kusho yena.
UMnu uDumisani Shelembe obeyingxenye yalo mkhankaso uthe: “Sengibonile kuba nezigameko eziningi lapha eMgungundlovu emalokishini nasemakhaya ngakho ezinhlelweni ezinjengalezi kumqoka ukuthi nathi madoda silishumayele izwi lokuthi “hhayi ngaphansi kwegama lami”. Ukuba ingxenye yalo mkhankaso angikwenziswanga ukubona iqembu elithize kepha ubumqoka bento abayihlelile.”
nguSiyethaba Mhlongo Sep 4, 2020